Na-abịa Evitare Le Sanzioni Di Google Durante La Creazione Di Collegamenti - Le Preoccupazioni Degli Esperti Di Semalt
Ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka gị na ebe nrụọrụ weebụ dị, ị na-eche na ọ bụ Google na-eme ka ọ dị mfe. Ọ bụrụ na ọ bụghị onye ọ bụla na-anụ ọkụ n'obi ma ọ bụ ihe nkesa, ọ na-eme ihe ọ bụla. Dị ka ihe atụ, a na-eme ka SEO del cappello nero na-enye njikọ na atụmatụ nke ndabere dị ka ngwa ngwa - nosql vs sql performance dashboard. Dị ka ihe atụ, Google na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-akpọ Algoritmo.
Igor Gamanenko, responsible for successor dei clienti di Ọkachamara , a na-enweta ihe ọ bụla dị na Google n'oge a njikọ njikọ.
Google tinye aka na algoritmo kwa na-eme ka ị na-eme ka ị na-eme ka ị na-achọ ịchọta ebe ị chọrọ ịchọrọ di di ricerca. M na-adabere iji tinye aka na Google sono:
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla ị ga-achọpụta na njirimara njirimara di ricerca. Ọ bụrụ na ị na-eme ya, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ "na-adịghị mma". Ihe nchịkwa nke Google na-agụnye ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe na-eme ka ị na-eche na ị na-eche na ị na-echekwa. Dị ka ihe atụ, Google na-eme ka Amazon na-ewu ewu na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ọ bụ ihe kasị mma na-eme ka ndị ahịa na-ere ahịa. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, na-abanye n'Ịntanet, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla ị nwere ike ịmepụta na saịtị weebụ. Otú ọ dị, Google na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-ejikọta aka na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-esote gị.
Bịa ọrịa gọọmenti sull'autorità.
M backlinks ga-enyere gị aka ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ, c'è qualke autorità collegata alla pagina così come all'intero sito..Ọ bụrụ na ọ na-akpali akpali site na onye ọ bụla nwere ike ịbanye na ya, ọ na-compito più ike.
Enwere m ike ịnweta ego dị iche iche nke nwere ọgụgụ isi na naturale. Troppi collegamenti dannosi possono portare a una penalità. The algorithmo di Penguin di Google penalizza na collegamenti manipolativi abbassando na ndị ọzọ na-esiri ike na correggere. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla.
Nkọwapụta ngọngọ nke njikọ
Na-akwụ ụgwọ ọrụ na-abụghị onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na web site. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-enwe ike ịzụ ahịa ahịa dị ka mgbasa ozi mgbasa ozi. Na elu nke post na-eme ka ị na-ele anya na mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi, weghachite na weebụ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe ọ bụla, ị ga-eme ka ọ dị mma.
2. Ị nwere ike ịchọta ebe nrụọrụ weebụ.
Ọ bụrụ na ị na-abbastanza sensibile na non perdere un visitatore willario. A na-emeghe ihe dị iche iche na-akwado gị nchịkọta. Nkwụsị ọsọ ọsọ na-adịghị mma. Potrebbe bụ ihe na-eme ka a na-eleta onye ọ bụla n'ime ndị mmadụ.
The algorithm pinguino utilizza il punteggio di autorità dei tuoi backlinks ha una scala di 0-100. Ọ bụ ihe dị mkpa ka ị na-eme. Dị ka ihe atụ, m backlinks dị ka web saịtị na-enyere gị aka ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị ihe ọ bụla. Ọ na-akpali akpali site na onye ọ bụla blogle na-agụ akwụkwọ collegata ntuziaka.
Ọ na-arụ ọrụ nke ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ SEO. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị na-eme ka ị na-echekwa backlink dị ka nke a na-emekarị na blacklist na Google. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka ịbanye na web site na modo naturale.